Tantaran'ny mpamatsy famonoana maty an'i Sina - Minghe Casting
Tantaran'i MINGHE CASTING 35-taona mahafinaritra
The Tantaran'ny Die Casting Ao Minghe; ny fanandramana dia tsy mandika ny hatsarana foana, fa amin'ny Minghe Casting dia afaka mahatratra ny roa ianao
Ny niandohan'i Minghe dia niverina tamin'ny 1985, rehefa nanomboka nanolotra serivisy fanariana maty ho an'ny tsena famolavolana indostrialy any Shina i David Pan. MINGHE dia natsangana tamin'ny taona 1985 tao amin'ny fivarotana kely 1000 sqft avaratry Dongguan, Sina avy amin'i David sy ny vadiny . Niorina tamin'ny cnc lathing machining sy ny teknolojia maty casting. Ny fizotry ny fitaovana izay nampiasaina hamoronana bobongolo dia natomboka tamin'ny Zinc, aliminioma ary fitaovana fampitaovana dia namboarina tamin'ny lamina 3D. Ireo fitaovana ireo dia nampiasaina hamoronana lasitra fanariana maty. Nararaka tao anaty lasitra avy eo ny metaly mba hamoronana casting。
Hoy i David: "Tamin'ny taona 1988, dia nanoratra anarana izahay Minghe (Dongguan) Co., Ltd., izay andiany voalohany ihany koa amin'ireo orinasam-panompoana maty tsy miankina eto Dongguan. Ny tenanay dia nanoratra ny lahatsoratra momba ny fikambanana. Talohan'io, ny fampiasam-bola manokana teto amin'ny firenena dia niorina tamin'ny orinasam-panjakana ary namatsy fitaovana. Fandraisana anjara amin'ny endrika fanodinana sy iaraha-miasa. "
Minghe Logo napetraka sy ny orinasa voalohany
Tamin'ny taona 1994 dia hitan'i David ny fotoana hanokafana bebe kokoa ny tsena sinoa ary tsapany fa saika hanomboka ny "hetsika indostrialy" tsy mbola nisy toy izany i Sina. Tamin'ny 1995, MINGHE CASTING dia naorina ara-dalàna ary nifindra tamina atrikasa lehibe kokoa (Production of die fanariana faritra) ao Beiche, Humen. Minghe Casting dia nitombo ary tamin'ny 2000 dia nifindra tamin'ny ampahany amin'ny toerana misy azy any Xiaojiejiao. Ny Minghe Casting amin'izao fotoana izao dia mitontaly 24,000 sqft.
"Tamin'izany fotoana izany dia nanafatra fitaovana japoney ireo zava-maniry eo an-toerana, izay lafo sy sarotra antoka antoka amin'ny serivisy. Nanao fomba hafa izahay ary nanolotra andalana famokarana marika famaranana marika amerikana sy amerikana maro hanitarana ny refy," David Notsiahivina: "Satria tsy misy indostrian'ny fiara sy môtô any Dongguan, ny milina famonoana maty no tena nampiasaina tamin'ny famokarana ny kojakoja ho an'ny mpanjifa isan'andro, indrindra izahay no nanao efitrano famonoana maty sy fanariana zinc maty tamin'izany fotoana izany."
Ny CNC Machining dia nampiana tamin'ny taona 2002 ho valin'ny fangatahan'ny mpanjifa andininy manontolo amin'ny fandefasana azy fotsiny. Ny masinina CNC lehibe kokoa dia nanolo ny masinina voalohany ary nanampy ny fahaizany. MINGHE Casting amin'izao fotoana izao dia miasa amin'ny milina CNC 10, afaka miasa amin'ny axis 5 izahay ary ny haben'ny fandriana lehibe indrindra 60 "amin'ny 120".
Ny fampandrosoana ny fanariana fasika
Ny fanariana fasika dia nampiana tamin'ny taona 2005 niaraka tamin'ny fampifangaroana fangaro mixer fasika mitohy amoron-dranomasina. Ny fanariana fasika dia fiderana lehibe ho an'ny Rubber Plaster Mould, dingana niorenan'ny orinasa. Ny fanariana fasika amin'izao fotoana izao dia mahatratra ny antsasaky ny orinasan'ny fananganana vy.
Ny fampandrosoana ny famoahana vola
Nampidirina Casting Investment tamin'ny 2006. Hafa kely noho ny fizotry ny fampiasam-bola nentim-paharazana ny fizotrany, amin'izay tsy mamorona fitaovana mihitsy izahay. Ny casting rehetra dia vokarina mivantana avy amin'ny lamina vita pirinty 3D. Ity fizotrany ity dia miasa tsara ho an'ny faritra kely sy ambany ary be pitsiny. Ity dingana ity dia haingana kokoa, mora vidy kokoa ary manome fenitra indostrialy tena izy, fandefasana tototra tanteraka raha ampitahaina amin'ny DMLS (Direct metal laser sinter)
Ny fampandrosoana ny milina Cnc
Tamin'ny 2007, Dongguan PTJ Hardware Product Ltd. dia natsangana ho fiaraha-miasan'i Zhou Hanping sy David Pan, toerana ao amin'ny Sifangyuan Industrial Park, Xinshapu, Huaide Community, Humen town, Dongguan City, Guangdong Province, China. Fitaovana fikarohana & famolavolana ary vokatra fanamboarana, ny karazana fitaovana dia misy aliminioma fanodinana, vy vy, varahina, varahina, titanium, maneziôma ary milina plastika sns.,. PTJ Shop dia mitana faritra mihoatra ny 5,000 metatra toradroa. Fiaramanidina & aerospace an'ny PTJ servisy, fiara mandeha, jiro LED, bisikileta, fitsaboana, elektronika, mekanika, solika & angovo ary indostria miaramila.
Minghe Casting dia nandalo ny fanamarinana momba ny famokarana SGS China ary ny ISO: 9001 2008 fanamarinana.
Fampiroboroboana ny fitsaboana hafanana anatiny
Tamin'ny 2010, Minghe Casting dia nanampy ny fahaizany manafana fanariana fitsaboana ao an-trano. Izany dia nampitombo ny hafainganana izay azonay omena ireo faritra voatsabo hafanana. Ny fizotrany dia matetika 2-3 andro talohan'izay, ankehitriny dia azo atao amin'ny ankamaroan'ny tranga amin'ny alina.
Fampivoarana ny paosin-kery
Tamin'ny 2013, nahazo orinasa mpamokatra vovoka Dongguan Tianniu Powder Minghe Casting. Fampidirana bebe kokoa ireo orinasa ambony sy ambany amin'ny sehatry ny indostria maty. Ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fitsaboana amin'ny tany sy ny vokatra azo avy amin'ny vokatra maty
Fanamarinana ITAF 16949
Tamin'ny taona 2015, Minghe Casting dia nandalo ny fanamarinana automatique IATF 16949 sy ny fanamarinana ISO 9001: 2015. Tamin'io taona io ihany, nampidirina ny detector CMM.
Tsipika fanariana fasika vaovao
Tamin'ny taona 2016, Minghe Casting dia nanitatra be indrindra ny tsipika fanariana fasika niaraka tamin'ny fanampiana mixer fasika mitohy lehibe kokoa miaraka amina hopper roa, fanaraha-maso mandeha ho azy ary famerenana mekanika. Io dia mamela ny Minghe Casting hifindra amin'ny habetsaky ny kalitao avo lenta fotsiny mankany amin'ny isan'ny famokarana, nefa mbola mitazona ny kalitao avo takin'ny tsena ihany. Ny fampiasam-bola dia maneho ihany koa ny fanoloran-tena ho an'ny Prototype Casting hampihena ny dian-tongony amin'ny fanjifana harena voajanahary, indrindra ny fasika silica ampiasaina amin'ny fanariana fasika. Noho ny tsena ambaratonga faharoa ho an'ny fasika haverina, ary ny fahaizana mampiasa indray ny 80% ny fasika ao anatin'izany dia hofoanana tanteraka ny fako amin'ny fako hatrany !!!
Tetikasa 10,000 vita
Tamin'ny lohataona 2020, nifindra isika! MINGHE CASTING dia nahavita tetikasa 10,000 tamin'ny totaliny. Ary nanitatra ny faritry ny orinasa.
Fampahatsiahivana fotsiny fa nasianay anao amin'ny filanao rehetra mifandraika amin'ny fananganana vy sy masinina: Aluminium, manezioma, zinc ary vy tsy misy fangarony - Fanariana famatsiam-bola - Famolavolana Sandt Air Precision - Fandefasana RPM - Fasika vita pirinty - Machining CNC - fanapahana fitaovana - Zeiss Fanaraha-maso CMM. Plus, Minghe Casting dia voamarina ISO 3: 9001 ary voasoratra anarana ITAR.
Manantena ny hihaino anao aho ary hiara-miasa aminao indray ato ho ato. Aza misalasala mifandray amiko amin'ny fanontaniana rehetra. Tena tsara ny maheno anao!